नेकपाको अबको कार्यभार - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
नवीन लुईटेल - October 23, 2020 0
Home बिचार नेकपाको अबको कार्यभार
By खेमराज निरौला
सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक विवादले निकास पाउने चरणमा पुगेको छ । गत ३० साउनमा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन ६ भाद्रमा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि जारी विवाद समाधानको बाटो लागेको हो । कार्यदलले सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरिसकेपछि एकअर्काविरुद्धका टीकाटिप्पणी अहिले बन्द भएका छन् । २६ भाद्रमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयले कार्यदलको सुझावलाई समेत समावेश गरी पार्टी र सरकार सञ्चालनको नयाँ मोडालिटी पारित गरेको छ । उक्त मोडालिटी पारित भएपछि नेकपा पार्टी र सरकार प्रभावकारी रूपमा चल्नेछ । आशातीत काम गर्न नसकिरहेको पार्टी र सरकार प्रभावकारी एवं सशक्त हँुदै अघि बढ्नेछ । पार्टी सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने र सरकार सञ्चालन अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले गर्ने सहमतिसहित सकिएको स्थायी समिति बैठकले पार्टी र सरकार प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने अठोट लिएको छ । पार्टी र सरकारबीच बढ्दै गएको आन्तरिक विवादले अब सकरात्मक निकास पाई पार्टी र सरकारको शक्तिलाई जनहितमा प्रयोग हुन सकोस् ।
स्थायी समिति सदस्य विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदललाई पार्टीभित्र देखिएका सबै असमझदारी र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन हुनेगरी निकास निकाल्न दिएको कार्यादेशले पनि शीषर््ा नेतृत्व आरोप लगाइएजस्तो पार्टी फुटाउने रणनीतिमा रहेको देखिएन । शीर्ष नेतृत्व पनि सबै पक्षको सम्मान हुने खालको निकास निकाल्न चिन्तित रहेको पाइयो ।
नेकपाको एकता टुटको अवस्थामा पुगेको भए राष्ट्रिय राजनीतिमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्नै निश्चित प्रायः थियो । उपल्लो वरिष्ठ तहका नेताको अडान र चर्काचर्की अभिव्यक्ति सुन्दा विवादको गाठो झनै कसिएको जस्तो देखिन्थ्यो । तर, ढिलै भए पनि अध्यक्षद्वयले एक कदम पछि हटेर विवादका अन्तर्वस्तुलाई सम्बोधन गर्न देखाएको तत्परताले आगामी दिनमा नेकपा थप संगठित र एकताबद्ध भई राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्नेछ ।
पूर्वएमाले र माओवादीबीच एकता किन आवश्यकता प¥यो ? एकताका सहमतिहरू केके थिए ? एकतामा खटपटी कहाँबाट सुरु भयो ? एकता भङ्ग हुनेसम्मको अवस्थामा आइपुग्नुमा को दोषी छ ? पार्टी एकतासँग जोडिएको राष्ट्रिय कार्यभार के थियो ? सर्वप्रथम यी र यस्ता तमाम प्रश्नको जवाफ खोजेर नेकपाले आगामी कार्यभारलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेतर्फ बाटो तय गर्नुपर्दछ । गणित र गुटको पक्षपोषणले न पार्टीलाई बलियो बनाउँछ, न त जनविश्वास नै आर्जन गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कार्यकर्ता एवं शुभचिन्तकमा ठूलो विचलन ल्याउने सम्भावना रहन्छ । यो वास्तविकतालाई मनन गरेर अब केही दिन केही समयपछिको नेकपामा आमूल परिवर्तन देखिनुपर्छ, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा, राष्ट्रिय मुद्दालाई हेर्ने सवालमा, महामारीले सिर्जना गरेको त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई सामान्यीकरण गराउने सवालमा ।
सत्ताको वरिपरि घुम्ने सम्भ्रान्तको समाजवाद र गरिब, निमुखा, विपन्न, श्रमजीवी, मजदुरलगायत बुझेको समाजवादबीच भेद पाउनु जरुरी छ
नेकपा नेतृत्वको अहिलेको सरकारले पाँच वर्ष निर्बाध रूपमा सत्ता सञ्चालनको जनादेश पाएको छ । सत्तासञ्चालनलाई केवल सत्तामा मात्र सीमित गरेर महŒवपूर्ण कार्यभारलाई बिर्सिएर सत्ता र शक्ति आर्जनमा मात्रै विवेक प्रयोग हुन थाल्यो भने देश र जनताले अब माफी गर्ने छैनन् । भनिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्तिवादी हँुदैन, नीति प्रधान हुन्छ । विधि, पद्धति, अनुशासन, संगठन सामूहिकताको भावनाले चलेको हुन्छ । तर, जबजब कम्युनिस्ट सत्तामा पुग्छन्, यी सब कुरा बिर्सिएर ‘म नै राज्य हुँ’को शैलीमा प्रस्तुत भइदिँदा सच्चा कम्युनिस्टको शिर निहुरिएको छ । अब बन्ने नेकपा यस्तो हुनेछैन । ज्यादै ठूलो राष्ट्रिय कार्यभार काँधमा बोकेर, एकताको विशिष्ट चरणबाट अगाडि बढिरहेको पार्टीले महŒवपूर्ण सवालहरूमा उच्च सावधानी अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीमा उत्पन्न विवाद समाधानार्थ गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाउनेछ ।
अघिल्लो केन्द्रीय समितिकै बैठकले आगामी चैत्र महिनामा एकता महाधिवेशन गर्ने भनी तोकिसकेको सन्र्दभमा अब पनि अनेक किसिमका शंका र उपशंकाले पार्टी र सरकारलाई क्षति पु¥याउने काम कसैबाट हुनुहुँदैन । एकता महाधिवेशनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कार्यभार धेरै छन् । मुख्य रूपमा पार्टीभित्र वैचारिक बहसलाई खुला गर्नुपर्दछ । विचार र सिद्धान्तमा घनीभूत छलफल गर्दै नेपाली परिवेशको समाजवाद स्थापनाको मार्गचित्र कोर्नेतर्फ पार्टी एवं सरकारका नीतिकार्यक्रम, कार्यनीति, रणनीति किटान गरी अघि बढ्नुपर्दछ । सत्ताधारी दलको काम चुनावताका आफ्नो घोषणापत्रमा गरेका वाचा र प्रतिज्ञा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । तर, यतिमा मात्र उसको कार्यभार पूरा हुँदैन । विधि, पद्धति, अनुशासन, सुशासन कायम गर्दै राष्ट्र र जनतालाई समृद्धिको बाटोमा लिएर हिँड्ने महŒवपूर्ण कार्यभार सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तीन तहका निर्वाचनको जनादेशले नेकपालाई पाँच वर्षमा देशको समृद्धिको गुरुयोजना तयार पार्ननिर्देश गरेको छ । देशलाई स्थीर सरकार दिनुपर्ने, सुशासन कायम गराउनुपर्ने दण्डहीनताको अन्त गर्नुपर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगारीको सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई समाजवादको मार्गतर्फ दोहो¥याउनुपर्ने कार्यभारबाट सरकार विचलित हुने अब छुट छैन । करिब दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारको असफलताले भविष्यमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले विसर्जन र विघटनको बाटो त समाउन लागेको होइन भनेर प्रश्न उठ्न थालिसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेतृत्व अघि बढ्नुपर्दछ । हामीले नै प्रशिक्षित गरेका, बनाएका नेता कार्यकर्ता त हुन नि, हामीले एकपटक भेटेर, भाषण गरेपछि फर्किहाल्छन् नि भन्ने नेतृत्वको यो गलत सोचाइले अब काम गर्नेवाला छैन ।
कसरी यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छ, जब यो जातपात, धर्मको कुरा गर्छ, कर्पोरेटको हित र संरक्षणमा सरकार उभिन्छ ? व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलियाको पन्जामा परेर आफ्नो निर्णय र अडानमा एकछिन पनि अडिग हुन सक्दैन ? आफ्ना नीति कार्यक्रम, बजेट बाँडफँड, निम्नवर्गसम्म पु¥याउन सक्दैन ? ठूलो संख्यामा रहेका युवाका समस्या समाधानमा उदासीन सरकारलाई कसरी कम्युनिस्ट चरित्रसँग दाँज्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । सत्ताबाहिर भएका मानिसको आवाजलाई सुझावको रूपमा ग्रहण गरेर अघि बढ्ने धैर्य सरकारले लिनुपर्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना परियोजनाको छनोट गरी प्रतिफल लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने रणनीति तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिक समाज, बौद्धिकवर्ग, सञ्चारक्षेत्र, विभिन्न पेसाकर्मी एवं राष्ट्रिय जीवनका महŒवपूर्ण क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका सम्मानित व्यक्तित्वसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर सल्लाह र सुझाव लिने संस्कारको विकास हुनुपर्दछ ।
कोरोनाको वैश्विक त्रास बढिरहेको छ । औषधि र भेन्टिलेटरको अभावमा मृत्युवरण गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । खाडी मुलुकमा रोजगार गुमाएर भोकभोकै प्रताडित भएर बसेका नेपाली जनताप्रति सरकारको केही दायित्व छैन ? जसरी महामारीको उद्गमस्थल चीनको वुहानबाट १ सय ७५ जना नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरेर स्वदेश फिर्ता ल्याएको थियो । त्यसैगरी खाडीलगायत अन्य मुलुकबाट पनि रोजगार गुमाएर पीडामा परेका जनतालाई
उद्धार गर्न किन ढिलाइ ?
अर्थतन्त्र कोमामा पुग्ने अवस्था आइसकेको छ । रोजगारी गुमाउने दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । गरिब भोकले मरिरहेको छ, न्याय नपाएर छटपटाइरहेको छ । तर, महामारी र लकडाउनलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउने उच्च राजनीतिक तहका नेतृत्वलाई सरकारले कारबाही गर्न नसक्नुले सरकार कसको हितमा काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक भएको छ । सत्तामा बस्ने र सत्ताको वरिपरि घुमिरहने सम्भ्रान्तको बुझाइको समाजवाद र गरिब, निमुखा, विपन्न, श्रमजीवी र मजदुरले बुझेको समृद्धि र समाजवादबीच रहेको खाडल नपुरेसम्म जनताको दैनिकी दयनीय अवस्थामा नै रहिरहन सक्छ ।
श्रीकृष्ण सिग्देल - September 24, 2020
डा. केसीसँग वार्ताका गर्न सरकारद्वारा समिति गठन
काठमाडौँ । सरकारले अनशनरत चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन...
खेल राजधानी समाचारदाता - June 28, 2020
Breaking News रासस - October 2, 2020
वामदेव गौतमले लिए राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - September 17, 2020
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित वामदेव गौतमले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारील मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गौतमलाई बिहीबार राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरेकी...